KEDU OTU ESI EMEZI IHE NYOCHA AHỤ KA ANYA GHARA ỊGWỤ GỊ - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Kedu otu esi emezi ihe nyocha ahụ ka anya ghara ịgwụ gị
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị mgbe ị na - arụ ọrụ na kọmputa - ọ ga - ekwe omume na otu n'ime ihe ndị nwere ike ime abụghị ntọala nyocha kachasị mma (M na - atụ aro ka ị gụọkwa isiokwu a ebe a:
Ọzọkwa, echere m na ọtụtụ ndị hụrụ nke a, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'azụ otu nyocha, ma n'azụ ọtụtụ: gịnị mere ị ga-eji arụ ọrụ maka otu n'ime ha ruo ọtụtụ awa, na mgbe ọzọ n'ime ọkara elekere, ị na-eche na ọ bụ oge iji tụfuo ma mee ka anya gị zuo ike? Ajuju a bu ihe omuma okwu, ma nkwubi okwu ndia choro onwe ha (nani otu n'ime ha adighi edozi nke oma) ...
N'isiokwu a, achọrọ m imetụ ihe nyocha kachasị mkpa nke na-emetụta ahụ ike anyị. Ya mere ...
1. Mkpebi ihuenyo
Ihe mbụ m na-atụ aro ịṅa ntị bụ nyocha ihuenyo. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na e nyeghị ya "nwaazụ" (ya bụ, nke a na-ahazi nlele ahụ) - foto a agaghi adi nma (nke ga - eme ka anya gị).
Ụzọ kachasị mfe iji lelee ya bụ ịga na ntọala mkpebi: na desktọọpụ, pịa bọtịnụ ntịrịndụ aka nri na nchịkọta nhọrọ na-emepụta ihe, gaa na ntọala ihuenyo (na Windows 10 n'ụzọ dị otú a, na nsụgharị nke Windows OS - a na - eme usoro ahụ n'otu ụzọ ahụ, ọdịiche ga - adị na aha akara: kama "Ngosipụta ntọala", a ga - enwe, dịka ọmụmaatụ, "Njirimara")
Na-esote window nke meghere, mepee njikọ ahụ "Ntọala ihuenyo dị elu".
Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ ndepụta ikikere nke nyocha gị na-akwado. Na otu n'ime ha, a ga-agbakwunye okwu ahụ bụ "Akwadoro" - nke a bụ mkpebi kachasị mma maka nyochaa, nke a ga - ahọrọ n'ọtụtụ ọnọdụ (ọ bụ kpọmkwem nke ahụ na-enye ìhè kachasị mma).
Site n'uzo, ụfọdụ na-ama ụma họrọ mkpebi dị ala ka ihe ndị dị na ihuenyo buru ibu. Ọ ka mma ịghara ime nke a, enwere ike ịgbasa font na Windows ma ọ bụ ihe nchọgharị, ihe dịgasị iche - yana na Windows. N'okwu a, foto ahụ ga-agbasikwu anya ma na-ele ya anya, anya gị agaghị adị njọ.
Geekwa ntị na paradaịs ndị a metụtara (nkeji a ga-esote nhọrọ mkpebi, ma ọ bụrụ na ị nwere Windows 10). Site n'enyemaka nke ihe eji emepụta ihe: agbazi agba, ederede ClearType, resizing ederede, na ihe ndị ọzọ - ị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi dị elu na ihuenyo (dịka ọmụmaatụ, mee ka font dị ukwuu). Ana m akwado imepe onye ọ bụla n'ime ha ma họrọ nhazi kacha mma.
I nwekwara ike ịhọrọ mkpebi na ntọala ndị ọkwọ ụgbọ ala gị (dịka ọmụmaatụ, na Intel ọ bụ taabụ "Ntọala Ntọala").
Ịnye ikikere na ndị ọkwọ ụgbọala USB
Gịnị nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ nke mkpebi?
Nsogbu nkịtị, karịsịa na kọmputa ndị toro eto (laptọọpụ). Nke bụ eziokwu bụ na n'ime Windows OS ọhụrụ (7, 8, 10) n'oge nrụnye, ọtụtụ mgbe, ọkwọ ụgbọala zuru ụwa ọnụ maka ngwaike gị ga-ahọrọ na arụnyere. Ee Ị nwere ike ịnweghị ụfọdụ ọrụ, ma ọ ga-arụ ọrụ ndị dị mkpa: dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwe mgbanwe ahụ n'ụzọ dị mfe.
Ma ọ bụrụ na ị nwere Windows OS ma ọ bụ "obere" ngwaike, ọ nwere ike ime ka ndị ọkwọ ụgbọala zuru ụwa ọnụ agaghị arụ ọrụ. N'okwu a, dị ka iwu, nhọrọ nke mkpebi agaghị adị (na ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ kwa: dịka ọmụmaatụ, nchapụta, ọdịiche, wdg.).
N'okwu a, buru ụzọ chọta onye ọkwọ ụgbọala maka nyocha gị na kaadị vidiyo, wee gaa n'ihu na ntọala ahụ. Iji nyere gị aka ijikọta otu isiokwu gbasara usoro kachasị mma maka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala:
ọkwọ ụgbọala melite na 1-2 òké clicks!
2. Ihè na iche
Ikekwe nke a bụ nkebi nke abụọ mgbe ị na-edebe ihe nyocha ahụ ị chọrọ ịlele ka anya ghara ịgwụ gị.
Ọ na-esi ike ịnye ọnụ ọgụgụ dị iche iche maka nchapụta na ọdịiche. Eziokwu bụ na ọ dabeere na ọtụtụ ihe n'otu oge:
- na ụdị nke nyocha gị (karịa kpọmkwem, nke edere ya na ya). Ụdị ụdị ihe atụ:
- site n'ịkụnye ụlọ nke PC na-eguzo: ya mere, n'ime ụlọ gbara ọchịchịrị, a ghaghị belata nchapụta na ọdịiche, na n'ime ụlọ na-egbuke egbuke - na Kama nke ahụ, gbakwunyere.
Ọdịdị dị elu ma dị iche na ìhè dị ala - otú ahụ ka anya na-amalite imebi na ngwa ngwa ha na-agwụ ike.
Kedu otu esi agbanwe agbanwe na ọdịiche?
1) Ụzọ kachasị mfe (ma n'otu oge na nke kachasị mma) iji gbanwee ọkụ, ọdịiche, gamma, omimi agba, na ihe ndị ọzọ .. Ngalaba - nke a bụ ịga na ntọala nke ọkwọ ụgbọala gị na kaadị vidiyo. Banyere onye ọkwọ ụgbọ ala (ma ọ bụrụ na ịnweghị ya :)) - M nyere njikọ dị n'elu na isiokwu banyere otu esi achọta ya.
Dịka ọmụmaatụ, na ndị ọkwọ ụgbọala Intel, gaa na ntọala ngosi - ngalaba "Ntọala Ntọala" (nseta ihuenyo n'okpuru).
Ịgbanwezi agba ihuenyo
2) Gbanwee enwu site na nchịkwa nchịkwa
Ịnwere ike ịhazigharị ọkụ site na mpaghara ike na nchịkwa Windows (dịka ọmụmaatụ, laptọọpụ laptọọpụ).
Nke mbụ, mepee ogwe njikwa na adreesị na-esonụ: Ogwe njikwa Ngwa na ụda Ike nnyefe. Na-esote, gaa na ntọala nke atụmatụ a họọrọ (nseta ihuenyo n'okpuru).
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhazigharị ọkụ: site na batrị na site na netwọk.
Site na ụzọ, laptọọpụ nwekwara bọtịnụ pụrụ iche iji gbanwee ìhè. Dịka ọmụmaatụ, na laptọọpụ, DELL bụ ngwakọta nke Fn + F11 ma ọ bụ Fn + F12.
Ntugharị arụ ọrụ na laptọọpụ HP maka mmụm.
3. Ụgha ume (Hz)
Echere m na ndị ọrụ PC ndị nwere ahụmahụ na-aghọta site na nnukwu ndị nlekọta CRT. Ugbu a ha anaghị eji ọtụtụ mgbe, mana ka ha ...
Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-eji nyocha dị otú ahụ - ṅa ntị nke ọma na ntanye ume (gbasaa), tụnyere Hz.
Nyocha nke CRT
Ntughari ume: oke oke a gosiputara ugboro ole kwa uzo a ga-egosi ihe oyiyi na ihuenyo. Dịka ọmụmaatụ, 60 Hz. - Nke a bụ ọnụ ala maka ụdị ndị nlekota a, mgbe ị na - arụ ọrụ dị otú ahụ - anya na-agwụ ike ngwa ngwa, dịka foto dị na nyocha ahụ adịghị edozi (ọ bụrụ na ị legide anya, ọbụna nkedo dị iche iche mara: ha na-agba ọsọ site na elu gaa na ala).
Ndụmọdụ m: ọ bụrụ na i nwere nlekota dị otú a, dozie ọnụego ume ọ dị ala karịa 85 Hz. (dịka ọmụmaatụ, site na mbenata mkpebi ahụ). Nke a dị ezigbo mkpa! M kwadoro itinye usoro ọ bụla nke gosipụtara ugboro mmelite na egwuregwu (dịka ọtụtụ n'ime ha na-agbanwe oge ndabara).
Ọ bụrụ na ị nwere LCD / LCD nyocha, mgbe ahụ, nkà na ụzụ nke ịmepụta foto dị iche, na ọbụna 60 Hz. - nye foto di mma.
Kedu otu esi agbanwe oge emelite?
Ọ dị mfe: a na-ahazi oge melite na ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo gị. Site n'ụzọ, ị nwekwara ike imelite ọkwọ ụgbọ ala gị. (dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na Windows "anaghị ahụ" ụdị usoro niile nke ọrụ gị).
Otu esi agbanwe oge emelite
4. Nyochaa ebe: ikiri elu, anya na anya, wdg.
Ike ọgwụgwụ (ọ bụghị nanị anya) dị ezigbo mkpa maka ọtụtụ ihe: otu anyị si anọdụ na komputa (na ihe), otú nyochaa dị, nhazi nke okpokoro, wdg. Ihe osise dị na isiokwu a dị n'okpuru ebe a (nke bụ na a na-egosi ihe niile 100%).
Otu esi anọdụ na PC
Lee, m ga-enye ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa:
ọ bụrụ na ị na-etinye oge dị ukwuu na kọmpụta - anaghị ewe ego ma zụta oche dị jụụ na wiil ndị nwere azụ (yana ebe nchekwa). Ọrụ na-adịwanye mfe karị na ike ọgwụgwụ adịghị agwụ ngwa ngwa;
anya site na anya gaa na nyocha kwesịrị ịdịkarịa ala cm 50 - ma ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ nke ọma n'ebe dị anya, wee gbanwee isiokwu mmepụta, gbasaa ederede, wdg. (n'ime ihe nchọgharị ị nwere ike pịa bọtịnụ Ctrl na + n'otu oge ahụ). Na Windows - ntọala niile a na - eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa;
Emebela ihe nyochaa n'elu anya ihu igwe: ọ bụrụ na ị na-eburu tebụl mgbe niile ma tinye nyochaa ya - nke a ga - abụ otu n'ime nhọrọ kacha mma maka nhazi ya. Ya mere, ị ga-ele anya na nyocha nke dị 25-30%, nke ga-enwe mmetụta dị mma n'olu gị na ịkwado (ị gaghị ada mbà na njedebe ụbọchị);
Ejila mbadamba tebụl na-adịghị mma (ugbu a, ọtụtụ ndị na-eme obere obere akpa nke onye ọ bụla na-adabere n'elu ibe ya).
5. Na-enwu ọkụ n'ime ụlọ ahụ.
Ọ nwere nnukwu mmetụta na mma nke na-arụ ọrụ na kọmputa. N'akụkụ a nke isiokwu m ga-enye ụfọdụ ndụmọdụ, nke m onwe m na-agbaso:
Ọ bụ ihe a na-achọsi ike ka ị ghara itinye nyocha ahụ ka ụzọ ọkụ nke anyanwụ si na windo see ya. N'ihi ha, foto ahụ na-adọrọ adọrọ, anya na-ama jijiji, malite ịda mbà (nke na-adịghị mma). Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịwụnye onyunyo n'ụzọ ọzọ, jirizie ákwà ngebichi, dịka ọmụmaatụ;
otu ihe ahụ na-emetụta isi (otu anyanwụ ma ọ̄ bụ ụfọdụ ebe ọkụ si ahapụ ha);
ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịghara ịrụ ọrụ n'ọchịchịrị: ụlọ ahụ kwesịrị ịgba ọkụ. Ọ bụrụ na nsogbu dị na ọkụ ahụ dị n'ime ụlọ ahụ: wụnye obere oriọna oriọna ka o wee nwee ike ịchacha ihu n'elu desktọọpụ niile;
Isi nke ikpeazụ: ehichapụ ihe nyocha ahụ site n'ájá.
Na nke a niile. Maka mgbakwunye - dịka na-ekele gị mgbe niile. Echefula iwepu oge mgbe ị na - arụ ọrụ na PC - ọ na - enyekwa aka ime ka anya dị jụụ, n'ihi ya, ha adịghị ike gwụrụ. Ọ ka mma ịrụ ọrụ ugboro abụọ na minit 45 na oge ezumike karịa nkeji 90. enweghị ya.